Hlola ukuvakasha kwe-India | Izindawo ezihamba phambili zokuvakasha eNdiya
Hlola eNdiya - izindawo zokuvakasha zaseNdiya
Indima Engathandeki - izwe lokuhlukahluka isizwe esihlaba umkhosi ngokuphila. Umgwaqo ngamunye nomgwaqo, i-alcove ne-crevice ine-quintessence engeke ilahleke kalula. Isifundazwe ngasinye saseNdiya sinesiko kanye namasiko ahlukile awenza isizwe esinamandla umoya. Ukuhlukahluka okucebile kwe-India kuye kwadlula ukudonsa kulabahloli bamazwe avela emhlabeni jikelele. Izintaba zeqhwa ezingena emagcekeni, amachibi amahle nemifula, izinqaba eziqhakazile, izimpawu ezibonakalayo ezakhiwe, ezenza impilo yemvelo yemvelo kanye nokunye ... konke ongacabanga ukuhlola eNdiya. Amaphakheji ethu okuvakasha e-India ahloselwe ngokukhethekile ukuhlola ukuhlukahluka.
I-North India: Njengendawo yokuhamba, eNyakatho India inokuningi okukunikezayo, okufanelekile kusuka kulezo ziteshi ezikhazimulayo zezintaba ukuya ezindaweni ezingokwenkolo. Ehlongozwa ngamathempeli asezindaweni zasendulo, amachibi ashisayo, izikhumbuzo ezingakhohlwayo, izimpophoma ezimangalisayo, iNorth India iqinisekisa isenzakalo esimangalisayo kubavakashi.
E-East India:Umbuso olawulayo wobukhosi obuningi obudala, i-East India inesiko esiqinile senkambiso nezinhlanga zenkolo. Iziqephu ze-Iconic namathempeli amahle, iziteshi zezintaba kanye nezitidi zetiyi, izindawo zokuphila zemvelo kanye nezinkuni ezivundile, imifudlana kanye namachibi angenalutho kuyisiphumo esihle kakhulu sokuhamba kwamabhizinisi.
North East India:Indawo encane ehlola, umhlaba ongaqondakali weNyakatho-mpumalanga kungenakwenzeka ukuthi indawo eyimfihlakalo ukuvakashela. Kuyiqiniso ngempela izulu lingakaze libonwe. Efihliwe ezigodini ezingenasici nezintaba ezihamba phambili ze-Himalayas, eNyakatho-East India yiyona encane eyaphenywa, enye yezwe kanye nokuma phakathi kwezindawo ezinhle kakhulu eNdiya.
I-West India:Ucebile emlandweni, ngokomoya, ezihlukahlukene ezihloniphekile kanye namasiko, eNdiya eNdiya inikeza izindlela ezihlukahlukene zokuhamba kahle okuya khona. Le ndawo ihlanganisa izikebhe ezithandekayo ezimnandi, ezimnandi iziteshi zamagquma, izinyathelo ezihamba phambili, izindlu zokuhlala zobukhosi zobukhosi, amasiko anempilo, izikhungo zokuhamba, izimpawu zomlando ezinqatshiwe kanye nokuphila okuthakazelisayo kwemvelo.
ENingizimu Afrika:ISouth India inamakhono nakho konke ukusesha kwabavakashi. It has iziteshi enhle amahle, amanzi, zasendle zasendle, izikhumbuzo zasendulo zomlando, izikebhe ezikhazimulayo, imifula emangalisa kanye nezizinda ezihamba phambili.
I-Central India:I-Central India, eyaziwa ngezinhlobonhlobo zayo ezihlukahlukene, iyindawo yezindawo zokuhlala zasendle nezikhungo zezwe. Ngaphandle kwezilwane zasendle, inamatshe amakhulu nezikhumbuzo, izifunda zezizwe, izindawo zokunethezeka, nezindawo zasendulo zokuhamba; empeleni iningi laseNdiya linikezela izivakashi zayo isitsha esihamba phambili sezinto ezikhangayo.
Khetha noma yiyiphi yethu AmaPhakheji Wokuvakasha eNdiya ukwenza iholidi lakho libe yisikhumbuzo.